ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ရေရှည်ဆက်ဆံရန် မသင့်လျော်ဟု တပ်မတော်က ပြောကြား
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းက ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၏ ပြောဆိုချက်များကြောင့် တပ်မတော်အနေဖြင့် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် အပြုသဘော ရေရှည်ဆက်ဆံရန် မသင့်လျော်ဟု တပ်မတော်က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ရာနှုန်းပြည့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသွားမည်
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၁၁ လက်ရှိတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်မည့် ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ရာနှုန်းပြည့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသွားမည်ဟု တိုင်းအစိုးရ လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒေါ်နီလာကျော်က ပြောကြားသည်။ “မြို့သစ်စီမံကိန်းကို ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်က လက်ဝါးကြီးအုပ် လုပ်ကိုင်မည့်အစား နိုင်ငံသားများ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိစေရေးတို့ကို ရှေးရှု၍.
ခေါင်းစီးဓာတ်ပုံ- မီးလောင်မှုကြောင့် နှစ်လလောက် ဆေးရုံတက်ပြီးကုသမှု ခံယူခဲ့ရတဲ့ ဦးကျော်ဆွေ။ ဓာတ်ပုံ-သိမ့်မွန်စိုး (J)
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားကိစ္စအား ကော်မတီတစ်ခု ဖွဲ့စည်းဖြေရှင်းရန် ထိုင်းနှင့်မြန်မာ သဘောတူ
ထိုင်းနိုင်ငံက ချမှတ်လိုက်သည့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းအသစ်ကြောင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ပေါ်ပေါက်လာသည့် အလုပ်သမား ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရေးအတွက် ကော်မတီတစ်ခု ဖွဲ့စည်းသွားရန် ထိုင်းနှင့် မြန်မာ တာဝန်ရှိသူများ၏ အဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲတွင် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်ဟု ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာက ဇူလိုင် ၈ ရက်နေ့တွင် ရေးသားထားသည်။ ထိုကဲ့သို့ အဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းကော်မတီတည်ထောင်ရေးအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ.
ယာဉ်တိုက်မှုအတွက် YRTA က တရားဝင် တောင်းပန်သင့်ဟု လွှတ်တော်အမတ်ပြောကြား
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်းက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် YBS ဘတ်စ်ကားနှစ်စီး တိုက်မှုကြောင့် ခရီးသည်များ သေဆုံးခဲ့ရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အာဏာပိုင်အဖွဲ့ (YRTA) အနေဖြင့် ပြည်သူလူထုအား တရားဝင် တောင်းပန်သင့်သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“မလုပ်၊ မရှုပ်၊ မပြုတ်”များအတွက်နေရာမရှိနိုင်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သတိပေး
ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ “မလုပ်၊ မရှုပ်၊ မပြုတ်”အတွေးအခေါ်အတွက်နေရာမရှိနိုင်ပါဘူးလို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယနေ့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဖေဇင်ထွန်း ခွင့်ရက်ရှည် ယူထားတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ တာဝန်တွေကို ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ အဆိုပါ ဝန်ကြီးဌာနနှစ်ခုက တာဝန်ရှိသူတွေက Frontier ကို အတည်ပြုပါတယ်။
အိပ်ချ်အိုင်ဗီပိုးရှိ လူငယ်များ ဝေဒနာ ကျိတ်ခံစားနေရ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိပ်ချ်အိုင်ဗီ ရောဂါပိုးရှိသော ကလေးနှင့် လူငယ်အယောက် ၁၀,၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး ၎င်းတို့သည် လိုအပ်သော ပြုစုကုသမှုများကို လုံလောက်စွာ မရရှိကြပေ။
Shell အမှတ်တံဆိပ် လောင်စာဆီဆိုင်များ ပြည်တွင်း၌ ဖွင့်လှစ်တော့မည်
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ နီးပါးတွင် အရောင်းဆိုင်ပေါင်း ၄၃,၀၀၀ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Shell အမှတ်တံဆိပ် လောင်စာဆီ လက်လီအရောင်းဆိုင်များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကြာမီ ဖွင့်လှစ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းတွင် လောင်စာဆီဆိုင်များဖွင့်လှစ်ထားသည့် Max Energy Myanmar နှင့် Shell တ့ိုအကြား လက်လီရောင်းချခြင်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လိုင်စင်.